Wenger Oo 21 Guuradii Tabbobarenimo Ee Arsenal Ugu Dammaashaaday Guul | Berberatoday.com
Wenger Oo 21 Guuradii Tabbobarenimo Ee Arsenal Ugu Dammaashaaday Guul
October 7, 2017 - Written by Berbera Today
London(Berberatoday.com)-Tabobaraha naadiga Arsenal – Arsene Wenger ayaa sanad guuradii 21 aad ee ka soo wareegtay maalintii uu qabtay xilka naadiga ugu dabaal degay guul uu ku khaarajiyey kooxda Brighton.
Nacho Monreal ayaa naadiga lagu naanayso the Gunners hogaanka u dhiibay bilowgii kulanka markii uu darbad xoogan ka dhex dusiyey xerada ganaaxa oo ciyaaryahano badani ku xoonsan yihiin, markaas oo uu helay kubad ay ku guuldaraysteen xiddigaha Brighton inay iska saaraan laag xor ah oo lagu soo ganay.
Kubad laag xor ah oo ay si fiican uga shaqeeyeen ciyaaryahanada kooxda Brighton ayaa wax yar kadib goolka furitaanka Arsenal, birta ka soo go’day.
Laakiin, Arsenal ayaa ku dartay gool labaad qaybtii labaad ee ciyaarta markii kubad weerar deg deg ah oo suluulux ah oo si qurux badan u dhamaystiray Alex Iwobi.
Guushani waxay xaqiijisay in kooxda tabobare Wenger ay dhibic kaliya ka hooseyso kooxda ay xaafada woqooyiga London ka wada dhisan yihiin ee Tottenham liiska kala saraynta horyaalka Premier League oo ay hogaanka u hayso kooxda Manchester City.